UThixo asindise ukumkanikazi ngePistols zoSondo - Izinto Zobugcisa
UThixo asindise ukumkanikazi ngePistols zoSondo
Le ngoma imalunga nokuvukela ezopolitiko zase-Bhritane. Uninzi lwabantu abancinci baziva behlukanisiwe ngumthetho obandayo wobukumkani basebukhosini, kwaye ukumkanikazi (uKumkanikazi uElizabeth), yayingumqondiso wabo.
'Ndivakalisa uluvo lwam ebukhosini ngokubanzi nakowuphi na umntu ozibophelela ngaphandle kwengcinga,' imvumi ekhokelayo uJohn Lydon (Johnny Rotten) uxelele Amatye agiqekayo . 'Ayamkelekanga kum. Kuya kufuneka uzuze ilungelo lokubiza ubuhlobo bam nokunyaniseka. '
Umhobe wesizwe waseBritane ubizwa ngokuba 'NguThixo Gcina uKumkanikazi.' Oku kuyigculela ngendlela enkulu, engahambanga kakuhle kubukhosi bamaNgesi.
Umphathi wezesondo uMalcolm McLaren wakhupha oku ukuba kungqamane ne-Queen's Silver Jubilee, umbhiyozo wokukhumbula unyaka wama-25 etroneni. Imipu yoSini kunye nabalandeli babo bayabucekisa ubukumkani kunye nalo mbhiyozo.
I-Queen's Silver Jubilee yenzeka nge-7 kaJuni 1977. Ngalo mhla, amaSondo amaPistols azama ukudlala le ngoma kumlambo iThames, ngaphandle kweWestminster Palace. Yayiyinto eqhelekileyo yokukhuthaza uMalcolm McLaren, njengoko babedlala indlela ibhendi eyayijikeleza ngayo 'isibhengezo' ngokudlala emlanjeni endaweni yokubeka unyawo emhlabeni. Ukusebenza akuzange kwenzeke, njengoko baphazanyiswa ngabasemagunyeni.
Ekuqaleni le nto yayibizwa ngokuba 'alikho ikamva.' Ibhendi yayidlala bukhoma kwaye irekhoda ingxelo yedemo enesihloko, kodwa bayitshintsha xa imvumi ekhokelayo uJohnny Rotten ifumene umbono wokuhlekisa ngobukhosi baseBritane.
Oku kwaba ngumhobe wentshukumo ye-punk eNgilani. Ibonakalise umsindo abantu abancinci abaziva malunga nokusekwa.
E-UK, le nto yathengisa ingoma engu- # 1 ngelo xesha, uRod Stewart 'Andifuni Ukuthetha Ngayo,' kodwa ngokumangalisayo nangokuphikisana bahlala kwi # 2.
Imipu yoSini isayinwe kwiirekhodi ze-A & M xa berekhoda oku. Baphosa ibhendi kanye njengoko yayikhutshiwe, batsala zonke iingoma. Abo batyibilikayo baba zizinto eziqokelelweyo zabaqokeleli. Ngo-2011 Umqokeleli weRekhodi Iphephancwadi liqulunqe iirekhodi ezingama-50 eziphezulu eziqokelelweyo, kwaye phezulu kwoluhlu kwafika ukukhutshwa kwe-A & M yale ngoma - ukuba unayo ikopi iindaba ezilungileyo zixabisa i- $ 12,000 (£ 8,000).
Oku kukhutshwe kwiRekhodi yeVirgin, ileyibhile yesithathu yokutyikitya iiPistols zoSondo (i-EMI kunye ne-A & M bobabini bayilahlile ibhendi kuba babenengxaki kakhulu). Yakhishwa njengeyodwa ngoMeyi 1977, kodwa icwecwe alizange liphume de kube nguDisemba, kuba babeneengxaki zokurekhoda.
Umdlali weBass uSid Vicious wajoyina iqela kungekudala ngaphambi kokuba ikhutshwe- yayiyenye yeengoma ezimbini awayezidlalela. Umlingisi wokuqala webassist uGlen Matlock wayenobuchule ngakumbi kwezomculo, kodwa wangqubana nabalingane bakhe, kukhokelela ekumkeni kwakhe.
Inkolelo eyaziwayo kukuba le ngoma 'yayivaliwe' yi-BBC kunye nezinye iindawo zokusasaza. Ngokwenyani, i-BBC ayizivalanga iirekhodi, kodwa yenza izigqibo zenkqubo ngokusekwe kwimigangatho yayo kwaye inyanzelisa imigaqo ethile, njengokuthintela imveliso ekhankanyiweyo. I-Radio ye-BBC 1 ayiyikhupheli ngaphandle ingoma yabo kuluhlu lwabo lokudlala, kwaye abanye abathengisi abaphambili (kubandakanya kunye noWoolworth kunye noWH Smith) bayala ukuyigcina, kodwa ngokuyibiza ngokuba yingoma le ngoma iye yathengiswa nangakumbi, kwaye ithengise i-150,000 emangalisayo. yakhutshwa ngeveki.
Isihloko esisebenzayo sealbham ibisithi 'Thixo Gcina amaPistoli oSondo.'
Emva kwenyanga kukhutshiwe oku, amanye amalungu ebhendi ahlaselwa ngamadoda axhasa ubukhosi base-Bhritane. Isandla sikaJohnny Rotten sonakaliswe ngokusisigxina.
Isigqubuthelo somntu omnye sibonise umfanekiso weKumkanikazi ngesikhonkwane sokukhusela ngomlomo wakhe, esenza umsindo ukusekwa ngakumbi. Isiciko sayilwa nguJamie Reid, owayeye eCroydon College of Art noMalcolm McLaren. Ukubhalwa kweeleta kwakuyilelwe ukuba kujongeka njengenqaku lentlawulelo, umbono onokukhutshelwa ngeendlela ezininzi zoyilo, kodwa ngakumbi phakathi kweebhendi zepunk ezizayo.
IBertrand - eParis, eFrance
I-Motorhead igubungele oku kwi-albhamu yabo ka-2000 SiyiNtloko yeMoto . Ikhava ye-albhamu yimbeko kwi-Sex Pistols yoqobo engatshatanga.
Yapapashwa kwakhona eNgilane ngo-2002 ukuze ihambelane ne-Queen's Golden Jubilee, eyayibhiyozela u-Queen Elizabeth unyaka wama-50 esihlalweni sobukhosi.
Kwi-Biennale yaseSydney ka-2008, umbhiyozo weeveki ezili-12 wobugcisa, umculi waseSwitzerland uChristoph Buchel wenza umboniso obizwa ngokuba 'Alikho ikamva.' Wajika igalari yaba yindawo yokuziqhelanisa neqela lomculo wePunk nawo onke amalungu angaphezu kweminyaka engama-80. Ibhendi yafunda le ngoma.
Ukuthetha no ICharts.com esemthethweni kudliwanondlebe luka-2012, uJohn Lydon (owayekade engu-Johhny Rotten) wathi akazimiselanga kuhlasela i-Queen's Silver Jubilee ngale ngoma. Uthe: 'Ndibhale irekhodi. Kwakungekho malunga nomzuzu othile ngexesha okanye ngembali-ndibhale irekhodi malunga nomxholo obaluleke kakhulu kum, ngendlela yobuqu, emva koko yonke le meko igutyungelwe kwaye yatyhileka. Andizange ndiyenze njengesenzo esibuhlungu ngokuchasene neNtlokoma. Andiqondi ukuba oko kuqondwe ngokupheleleyo. '
I-Sex Pistols ikhokela imvumi uJohn Lydon, aka Johnny Rotten, wayenengoma engqondweni yakhe kwakudala ngaphambi kokuba ayizise kwiqela okanye ade azibophelele ephepheni. Ucacisile kudliwanondlebe noDaniel Rachel ( Ubugcisa beNgxolo: Incoko nababhali beengoma eziBalaseleyo ): '' UThixo asindise ukumkanikazi 'wayebaleka engqondweni yam iinyanga, kwakude kudala ngaphambi kokujoyina i-Sex Pistols; umbono wokuba nomsindo, ukungakhathali kukaKumkanikazi kubemi kunye nokuzikhetha nokungakhathali kuthi njengabantu. Kwafuneka ndisebenze ekwakheni iisayithi ukuze ndifumane imali yokuya ekholejini kuba ndifuna ukuqhubela phambili nemfundo yam kodwa ke ndirhafiselwa i-f - k. Kutheni ndibhatalela laa nkomo isisidenge ingakwazanga ukunika u-s-t ngam? Kunye nokuza kweePistoli kwaye ngenye intsasa ngaphezulu kweembotyi ezibhakiweyo ndizibhale phantsi ngexesha elinye kwitafile kamama notata yasekhitshini. '
Iingoma zamandla othando nguJennifer Rush
Iingoma zeLitye eliBandayo nguRainbow
Itempile kaKumkani ngoThingo
Iingoma zeSixeko saseParadesi nguGuns N 'Roses
Intsingiselo ye-7777 -Ukubona inombolo yeengelosi ezingama-7777
Isiqhamo esinqwenelekayo nguDrake
Bark eNyangeni ngu-Ozzy Osbourne
Iingoma zokuLondon eLondon ngeClash
Iingoma zeeNdawo zeGolide nguSting
Lyrics for Usenguye by Shania Twain
Iingoma zeModi yeSicko nguTravis Scott
Iingoma zokuba Usuku olungcono ngu-Avicii
Ngaphantsi nguLady Gaga (kunye noBradley Cooper)
lets just kiss and say good bye iingoma
Ithetha ntoni iliwa icasbah
mna nawe sana asiyonto kodwa izilwanyana ezanyisayo
Imfazwe kutheni singenakuba ngabahlobo
Ingelosi inombolo 444 intsingiselo